ဒီဇင်ဘာ 28, 2016 | အထူးပြောစရာမရှိ | ကလေးများ, အဝတ်အစား, tutorials
လှမ်း 1 လူအပေါင်းတို့သည်ပုံစံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်. Lay the SLEEVE FACING RIGHT SIDES together with the SLEEVE. pin နှင့်ချုပ်. grade ကတော့ချုပ်ရိုးစရိတ်. လှမ်း2Turn the FRONT facing to the WRONG SIDE. Pin and stitch the HEM up until the edge of the FRONT facing. Clip and grade the seam allowance. လှမ်း […]